नमस्ते, प्रिय मित्र, यस कलामा जर्मन अभिनेत्री विषय वर्णन, खासकर जर्मन भाषा सिक्ने साथीहरू जुन उत्सुक छन्, कहिलेकाहीँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ र धेरै व्यक्तिले बुझ्न गाह्रो छ। जर्मन आर्टिकेलर हामी बारेमा कुरा गर्नेछौं।
हाम्रो पहिलो पाठमा, हामीले भनेका थियौ कि जर्मनमा जेनेरिक नामहरूको आद्याक्षर ठूला अक्षरमा लेख्नुपर्दछ र प्रत्येक जीनसको नाममा लेख हुनुपर्दछ।
जर्मनमा लेख भनिने हाम्रो पाठमा हामी सबैभन्दा पहिला लेख भनेको के हो, जर्मनमा कति किसिमका लेखहरू छन्, र यी लेखहरूको अगाडि कुन शब्दहरू छन् भनेर कुरा गर्नेछौं। अन्तमा, हामी उदाहरणले व्याख्या गरेका कुरालाई अझ सुदृढ पार्नेछौं र जर्मन लेखहरूको विषय परीक्षणको साथ हामी निष्कर्षमा पुग्नेछौं।
जर्मन लेखहरूको विषय धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो धेरै राम्रोसँग सिक्नुपर्दछ। जर्मन लेखहरू तपाइँ कति जर्मन भाषा बोल्न र लेख्न सम्भव छैन कति लेखहरू उपलब्ध छन् भनेर नबुझीकन। विशेष गरी विषयहरू जस्तै संज्ञा र विशेषण वाक्यांशहरूमा मा लेख यो तपाइँको काम को बारे मा धेरै राम्रो जानकारी को लागी सजिलो हुनेछ।
जर्मन लेखहरूमा व्याख्यान पढिसकेपछि, हामी तपाईंलाई पाठको अन्तमा केही प्रश्नहरूको साथ जर्मन लेखको विषयवस्तु लिने सल्लाह दिन्छौं। अब हामी हाम्रो शीर्षकहरू दिनुहोस् र हाम्रो पाठ सुरू गरौं।
जर्मन SUBJECT SUBJECT मा लेखहरू
लेख प्राय: जर्मन भाषा सिकाउनेहरूमध्ये सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषयहरूको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
हामी यस खण्डमा यो विषय प्रवेश गर्नेछौं र हामी आशा गर्छौं कि यो देख्न सकिन्छ कि यो धेरै जटिल समस्या छैन।
हामी ध्यान दिनुहोस् कि यदि तपाईंले शब्दहरू तिनीहरूका लेखहरू सँगै मेमोरिज गर्नुभयो भने, तपाईंलाई यससँग धेरै समस्या हुनेछैन। तर अझै, हामी यस विषयमा व्यापक समूह बनाउनेछौं र कुन लेखका साथ कुन प्रकारका शब्दहरू प्रयोग हुन्छन् भनेर जाँच गर्नेछौं।
अब तपाईंको स्थितिमा जानुहोस् ..
जर्मनमा यौन नामका जीभहरू छन् र यी लिंगहरू तीन प्रकारका हुन्छन्।
जर्मनमा, नाउन्स या त पुरुष, महिला वा तटस्थ हुन्छन्। त्यसकारण नामको अगाडि लेख नामको लि gender्ग अनुसार परिवर्तन हुन्छ।
जर्मनमा दुई किसिमका लेखहरू छन् जसमध्ये पहिलो निश्चित लेखहरू हो र दोस्रो अनिश्चित लेखहरू।
जर्मनमा, केहि लेखहरू भनिन्छ, das र die लेख।
जर्मनमा ईन्फिनिट लेखहरू ein र eine लेख हुन्।
अंग्रेजीमा एक निश्चित लेख र अनिश्चित लेख अवधारणा पनि छ। अ lessons्ग्रेजी पाठ लिने साथीहरूले यस विषयलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दछन्। अ In्ग्रेजीमा, लेख निश्चित लेख हो, र त्यहाँ २ अनिश्चित लेखहरू छन्, एक र एक। अंग्रेजीमा केहि लेख र अनिश्चित लेखको प्रयोग जर्मनमा मिल्दोजुल्दो छ।
जर्मनमा केहि लेखहरू र अनिश्चित लेखहरू हामीले भन्यौं कि त्यहाँ दुई प्रकारका लेखहरू छन्।
त्यसैले अब उनी भन्छन, das र die लेख भनेर परिचित जर्मन विशिष्ट लेख यस बारे जानकारी दिनुहोस्:
जर्मनमा, सबै जीनस नाम अभिलेख भनिन्छन् der, das, die एउटा शब्द भेटियो। यी शब्दहरूको कुनै टर्की बराबरी छैन र हाम्रो भाषामा पूर्ण रूपले अनुवाद गर्न सकिँदैन। यो शब्दहरू तिनीहरूमा भएको नामको एक अंश हो। नाम सिक्दा, यसको लेख सँगै जान्नु आवश्यक पर्दछ जस्तो कि यो नामको साथ एक शब्द हो। यो der das die शब्दहरू विशिष्ट लेखहरूको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ।
यदि तपाइँ लेख लेखै बिना नै शब्द याद गर्‍यो भने, तपाइँले सिकेका शब्दले धेरै गर्दैन। जर्मन, एकवचन र बहुवचन, विशेषण वाक्यांशहरू र यस्तै संख्या। लेखको महत्त्व अझ राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। लेख केहि स्रोतहरुमा "definely"र केहि"परिभाषायो "को रूपमा पास हुन्छ। थप रूपमा, लेखहरू धेरै शब्दकोषहरू र स्रोतहरूमा संक्षिप्त छन् जसरी तल देखाइएको छ। कृपया देखाईएको संक्षिप्त नाम मनमा राख्नुहोस्।
जर्मनमा, लि gender्ग नामहरूको लेख जसको लि gender्ग पुरुष "der" हो।
जर्मनमा लेख "मर्नुहोस्" लि gender्ग संज्ञाका लागि लेख हो जसको लि gender्ग महिला हो।
जर्मनमा लिंग रहित लैंगिक संज्ञाको लेख "das" हो।
जहाँसम्म, जब हामी संज्ञाको लि say्ग भन्छौं, अब निम्न ध्यान दिनुहोस्: जर्मनमा संज्ञाको लि the्ग जान्न गाह्रो छ, तपाइँ त्यो नामको अर्थबाट नामको लि gender्गको भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्न। यो सबै व्याकरण र शब्द संरचना को बारे मा छ। तसर्थ, जब एक नयाँ शब्द सिक्दै, त्यो शब्दको लिंग र के हो लेख तपाईं शब्दकोशबाट मात्र के सिक्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि त्यहाँ शव्दको लि gender्ग र लेख जर्मनमा के हुन सक्छ भनेर पूर्वानुमान गर्ने केही विधिहरू छन्, यो अझै पनि सबैभन्दा सही छ। जर्मन शब्दकोशमा हेर्न र सिक्न।
जर्मन लेखहरूको उदाहरण:
das Buch : पुस्तक
मर्न Katze : बिरालो
डर बाउम : रूख
मर्न blume : फूल
डास ओटो : कार
जर्मन आर्टिकेल उपयोगको सचित्र उदाहरण
निम्न छविमा जर्मनमा आर्टिकेल प्रयोगको बारेमा एक शब्द हो।
लेख देखेको रूपमा, मर लेख नाम अगाडि महिला सेक्स, नाम पनि तटस्थ प्रजाति Das लेख अगाडि स्थित हो, पुरुष सेक्स को नाम को अगाडि चित्रमा भन्छन्।
जर्मन शब्द को अर्थ को लिङ्ग बीच कुनै सम्बन्ध छ, त्यसैले nouns को पुरुष लिङ्ग को reminiscent अंग्रेजी मा रूपमा पुरुष हो, शब्द को स्त्री लिङ्ग को स्त्री लिङ्ग रूपमा मामला छैन evokes।
जर्मनमा संज्ञाको लि gender्ग शब्दकोशबाट कण्ठ गरेर मात्र सिक्न सकिन्छ। विशेष श्रेणीहरूमा नाउन्सको जीनसलाई समूह गरिएको छ। जर्मनमा संज्ञाको लि gender्गको बारेमा थप जान्न जर्मन नाम विषय नामांकन तपाईं आफ्नो स्थान समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
शब्दकोशहरूमा जर्मन लेखहरूको प्रतिनिधित्व
जर्मन कलाकार शब्दकोशहरूमा, हामीले माथि माथि लेखिसक्यौं, "डेर टिस्च, डाइ काटजे" र यस्तै। तिनीहरू फारममा समावेश छैनन्। जर्मन शब्दकोशहरूमा शब्दहरू तिनीहरूका लेखहरूसँग लेखिएका छैनन्। शब्दको छेउमा केवल एउटा सानो चिन्ह राख्नुहोस् र लेख के भयो निर्दिष्ट गरिएको छ। अधिकतर स्रोतहरूमा लेख निम्न रूपमा संक्षिप्त छन्:
को लेख m वा r क्यारेक्टरहरू।
को लेखfवाeक्यारेक्टरहरू।
को लेख n वा s क्यारेक्टरहरू।
त्यसैले यो हो;
शब्द "m" वा "r"
केल्मिमिनिन अक्षरहरू एफ वा ई सँग मिल्दछ "मर"
यो अक्षर "n" s द्वारा वर्णित kelmenin संग "दास" हुनु पर्छ।
एक मिट्टी स्पष्ट को जर्मन शब्दकोशहरूमा, एक सानो r पत्र राखिएको छ
एक मिट्टी स्पष्ट को जर्मन शब्दकोशहरूमा, एक सानोeपत्र राखिएको छ
एक मिट्टी स्पष्ट को जर्मन शब्दकोशहरूमा, एक सानो s पत्र राखिएको छ
यी पत्रहरू पनिr die das तिनीहरूको लेख को अन्तिम अक्षर हो।
एक मिट्टी स्पष्ट को त्यहाँ सानो छ r पत्र राख्नुहोस्, को गण्डको अगाडीeपत्र राख्नुहोस्, को ise s चिठी राखिएको छ। यी पत्रहरू पनिr-due--उत्पादनs तिनीहरूको लेख को अन्तिम अक्षर हो। उदाहरण को लागी, यदि तपाई शव्दको छेउमा अक्षर r देख्नुहुन्छ जब तपाई शब्दकोशले हेर्नुहुन्छ, यसको मतलब यो हो कि तपाईले हेरिरहनु भएको लेख डेरमा छ, त्यस्तै गरी, यदि शव्दको छेउमाeछ भने यसको अर्थ त्यो शब्द लेखसँगै मर्दछ, र यदि त्यहाँ s छ भने, लेख das हो। केहि शब्दकोश MFN अक्षरहरू, एमएफएन अक्षरहरू म maskulin, म Femininum, Neutrum (नर लिंग-स्त्री लिङ्ग-तटस्थ लिङ्ग) शब्दहरूको प्रारम्भिक हो। Artikelini को पत्र, पत्र एफ Artikelini मर छ, एन द द आर्टिकेलिनी हो ।
सामान्यमा, स्रोतहरू र शब्दकोशहरू यी दुई प्रयोगहरूको एक चयन गर्नुहोस्,m -f- n"वा"r - s - e"पत्रहरू।
जर्मन केहि आर्टिकेलर र अज्ञात कलाकलर
प्रिय मित्रहरु, हामीले उल्लेख गरेकै अनुसार, जर्मन शब्द सिकिरहेको बेला वा नयाँ जर्मन शब्द सिके पछि हामीले निश्चित रूपमा त्यो लेख यसको लेखबाट सिक्नुपर्दछ।
एक शब्द सिक्दै यो लेख के हो? हामीले आश्चर्य र हेर्नु पर्छ। हामीले प्रत्येक शब्द समूह गर्नुपर्दछ जुन हामी यसको लेख अनुसार नयाँ सिक्छौं र यसलाई हाम्रो दिमागमा त्यसरी लेख्छौं।
प्रिय मित्रहरु, शब्दहरु को अगाडि हामी वाक्य मा प्रयोग गर्नेछौं केहि लेखहरू Ile ज्ञात, हामी के भन्न सजीलै बुझिन्छ, अगाडि उल्लेख गरिएको वस्तुहरु वर्णन गरिएको छ। उदाहरण, "मैले स्याउ खाएँयो बुझिन्छ कि वाक्यमा उल्लेखित स्याउ पहिलेको ज्ञात स्याउ हो। त्यसो भएमैले स्याउ खाएँ"वाक्य" संगमैले त्यो स्याउ खाएँ"वाक्यले उही अर्थ दिन्छ। यस वाक्यमा यस वाक्यमा के बुझिन्छ "elmaयसको मतलब यो हो कि एक ज्ञात स्याउ बीचमा पहिले नै उल्लेखित स्याउ हो भनेर बुझिन्छ।
जर्मनमा केहि लेखहरू der - das - मर्न हामीले लेखका बारे जानकारी दियौं।
अब जर्मनमा अनिश्चित लेखहरूको बारेमा केही जानकारी दिनुहोस्।
जर्मन der - das -die केहि लेखहरु बाहेक ईइन र ईइन त्यहाँ दुई अनिश्चित लेखहरू छन्, अर्थात्।
Ein र eine शब्दको अर्थ "एक" वा "कुनै पनि" हो। तिनीहरू यस तरीकाले अनुवाद गर्न सकिन्छ।
त्यसोभए, कुन शब्दहरूसँग लेखहरू ein र eine प्रयोग हुन्छन्, र कुन शब्दहरू अघि ein र eine द्वारा गरिन्छ?
सबै शब्दहरू जुन पुरुष र लिless्ग रहित छन् तिनीहरूको अगाडि लेख ein हुन्छ।
महिला सेक्स का सबै शब्दहरूको अगाडि लेख eine हुन्छ।
वा हामी यसलाई अर्को तरिकाले भन्न सक्छौं। हामीले भर्खरै नै माथि उल्लेख गर्यौं कि पुरुष सेक्स शब्दहरूको विशेष लेख "der" लेख थियो। लैंगिक रहित शब्दहरूको लागि निश्चित लेख "दास" थियो। महिला लि gender्ग शब्दहरूको लेख "मरो" लेख थियो।
निश्चित लेख der वा das सहित शब्दहरूको अनिश्चित लेख ein लेख हो।
यदि निश्चित मृत्युको साथ शब्दहरूको अनिश्चित लेख छ भने, eine लेख हो।
अब तपाईं जर्मन शब्दहरूको अगाडि त्यो भन्नुहुनेछ विशिष्ट लेख यो हुनेछ? अप्रत्यक्ष लेख यो हुनेछ शब्दहरूको अगाडि der - das - मर्न लेखहरू मध्ये एक फेला पर्नेछ वा ein - eine के लेखहरू फेला पार्न सकिन्छ?
अब यस प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। मुख्य लेख विशिष्ट लेख होत्यसो भए der-das -die लेख जब एक शब्द सिक्दै, यो शब्द लेख हो, das वा मर्न भनेर पत्ता लगाउन पर्याप्त छ। यो स्पष्ट छ कि कुन विशेष लेख ein र eine अनिश्चित लेखको सट्टा प्रयोग गरिन्छ। हामीले अघि उल्लेख गर्यौं, यदि ऊ जर्मन शब्दको निश्चित लेख भन्छ भने त्यो शब्दको अनिश्चित लेख ein हो।. यदि एक जर्मन शव्दको विशेष लेख दास हो भने, त्यो शब्दको अनिश्चित लेख पनि ein हो।, यदि एक जर्मन शव्दको विशिष्ट लेख मरण लेख हो भने, त्यो शब्दको अनिश्चित लेख eine लेख हो।
यदि वाक्यमा प्रयोग भएको शब्द, नाम, प्रयोग गरिएको वस्तु, वस्तु वा केहि पनि हो, यदि यो ठेगाना वा व्यक्तित्व द्वारा पनि ज्ञात छ, यदि यो पहिले नै उल्लेख गरिएको छ, यदि त्यो वस्तु देखिएको छ वा यस बारे सूचित गरिएको छ भने संक्षेपमा, एउटा ज्ञात वस्तु त्यस अवस्थामा, वाक्यमा प्रयोग गर्न यो शब्दको अगाडि निश्चित लेख छ।
यद्यपि वाक्यमा प्रयोग गरिने नाम, वस्तु, वस्तु, शब्द जे पनि हो, यदि यो पहिले ज्ञात वस्तु होईन, यदि यो कुनै वस्तु हो भने, यदि यो अनिश्चित वस्तु हो भने अनिश्चित लेख, अर्थात् ein - eine , यस शब्दको अगाडि प्रयोग भएको छ।
उदाहरण को लागी, दुई समान वाक्य तल लेख्नुहोस्:
मैले एउटा कार किनें
मैले त्यो कार किनें
पहिलो वाक्यलाई हेरौं,मैले एउटा कार किनें"भन्छन्। यदि तपाइँ कसैलाई भन्‍नुभयो कि मैले कार किनेको छु भने उनीहरू के भन्छन्? ओओओ भाग्य, तपाईले के किन्नुभयो, कुन ब्रान्ड, नयाँ वा दोस्रो हात, कति पैसा र उनीहरूले प्रश्नहरू सोध्छन्? त्यसो भए, पहिलो वाक्यबाट बुझ्न सकिन्छ, पहिलो वाक्यमा शब्द कारको अगाडि अनिश्चित लेख अर्थात ein वा eine उपयुक्त लेख प्रयोग गरिनेछ। त्यसोभए कुन प्रयोग गरिनेछ? जर्मन शब्द शब्दका लागि डास ओटो यो शब्द हो। लेख das लेख हो। त्यसोभए ड्यास केहि लेखको सट्टा ein अनिश्चित लेख यसलाई प्रयोग गरिनेछ।
दोस्रो वाक्यलाई हेरौं मैले त्यो कार किनें भन्छ त्यो कार तिमिले भनेजस्तो पहिले नै उल्लेख गरीएको छ एउटा कार। यो एक कार जस्तो देखिन्छ जुन चालित गरिएको छ, देखिएको छ वा कुरा गरिएको छ। यदि यस दोस्रो वाक्यमा कार एक ज्ञात कार हो भने, त्यसपछि यो जस्तो वाक्यमा निश्चित लेख अर्थात् der - das - die एउटा लेख प्रयोग गरिने छ। यस वाक्यमा किनभने कारको लागि जर्मन शब्द das Auto हो डास ओटो शब्द प्रयोग हुनेछ।
यो केहि लेखहरू र अनिश्चित लेखहरूमा भिन्नता हो।
das Auto: कार
दास बुच: किताब
der Tisch: तालिका
प्रिय मित्रहरू, हामीले जर्मन लेखहरू, जर्मन लेखहरू, अनिश्चित लेखहरू, जर्मन कलाकार हामीले यस विषयलाई हेर्नेछौं। जर्मनमा लेखहरूको विषय एक विषय हो जुन वास्तवमै धेरै होशियारीका साथ अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। यसै कारणले जर्मन लेख व्याख्यान यति विस्तृत रूपमा बनाईएको हो।
जर्मन कलाकार हामीले यसको लम्बाईमा व्याख्या गर्ने प्रयास गर्यौं किनकि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो।
जर्मनमा दुई प्रकारका कलाकारहरू छन्।
जर्मन, डेर, मर र दासमा कलात्मक रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यहाँ अनिश्चित लेख, ein र eine पनि छन्। हाम्रो साइटमा दुबै लेखहरूको विस्तृत वर्णनहरू छन्। जर्मनमा लेखहरू सिक्नको लागि दुबै निश्चित लेखहरू र अनिश्चित लेखहरू राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्दछ। अब हामी हाम्रो लेखलाई केही लेख र अनिश्चित लेखहरू प्रदान गर्दछौं।
जर्मन विशिष्ट अभिव्यक्ति विषय विवरण
जर्मन अज्ञात आर्टिकलर विषय अभिव्यक्ति
त्यहाँ जर्मनमा3आर्टिकल छ: der, das, die
जर्मन आर्टिकलर विषय परीक्षण
अहिले हाम्रो जर्मन कलाकलाकार विषय परीक्षण भंग गर्नको लागि केही मिनेटहरू छन्।
प्रिय मित्रहरु हाम्रो पोर्टल, जो टर्कीको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा लोकप्रिय जर्मन साइट साइट हो जर्मन लेख उपलब्ध दर्जनौं पाठ्यक्रम को बारे मा लेखिएको। हाम्रो साइट को खोज सेक्सन खोजी गरेर वा जर्मन कलाकार तपाईं शीर्षक शीर्षकमा क्लिक गरेर जर्मन कलाकारको बारेमा तयार गर्नुभएको सबै पाठ्यक्रमहरूमा पुग्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं हाम्रो जर्मन पाठहरू बारे मा कुनै पनि प्रश्न र विचार लेख्न सक्नुहुन्छ पंचांग फोरममा वा तल टिप्पणी सेक्सनमा। तपाईका सबै प्रश्नहरू पंचांग सदस्यहरू द्वारा छलफल गर्न सकिन्छ।
ट्याग: 10। वर्ग जर्मन विषय अभिव्यक्ति, 9। वर्ग जर्मन विषय अभिव्यक्ति, german artikel, जर्मन कलाकार, almancada artikel konusu, आर्केलिक जर्मनी, आर्टिकेल के हो?, कलाकार पाठ